Maitiro ekutarisa bhatiri reAirTag yako | Nhau dze iPhone
Maitiro ekutarisa bhatiri reAirTag yako
Miguel Hernandez | 03/05/2022 10:00 | HomeKit, iPhone, Apple zvigadzirwa, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kwapera gore rapfuura kubva pakatangwa zviri pamutemo AirTag uye vamwe vashandisi vatotanga kubvunza kuzvimiririra, kunyanya tichifunga kuti mabhatiri ayo haabatike zvakare. Nekudaro, nguva yebhatiri iyi yakarebesa uye kwete izvozvo chete, tinogona kufanoona shanduko pachine nguva.
Aya ndiwo maitiro aunokwanisa kutarisa bhatiri rasara reAirTag yako uye uende mberi kwako nekushandura bhatiri kuti rigare riine zvinhu zvako zviripo. Zviri nyore, uye senguva dzose, muIphone Nhau isu tichakuudza matanho ese nenzira yakapusa.
Kutanga, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Apple haitipi nzira chaiyo, kureva, neperesenti, kuziva kuti yakawanda sei bhatiri AirTag yedu yasara. Isu tichafanirwa kugadzirisa mufananidzo wakaita seunopihwa mukona yepamusoro yekurudyi ye iPhone yedu uye mupfungwa tiite fungidziro yekuverenga. Muchiono, bhatiri reAirTag rinotora rinenge gore, kunyangwe izvi zvichizoenderana nezvakawanda pamashandisiro aunopa uye kuti wakadii kutarisa nzvimbo yaro, mune yangu, ndichine kuzvitonga kwakawanda kwasara gore rinotevera. Kuiongorora kuri nyore seizvi:
Pinda iyo application kutsvaka yeApple mudziyo wako
Sarudza Zvinangwa uyezve iyo AirTag ine bhatiri raunoda kutarisa
Kana iyo AirTag chaiyo ruzivo ikavhurwa, bhatiri rinoratidzwa mukona yekumusoro kuruboshwe, kurudyi panzvimbo ye "play sound" uye pazasi pezita.
Izvo zviri nyore iwe uchakwanisa kutarisa kuzvimiririra kweAirTag yako. Kana iwe uchifanira kuitsiva, unogona kutarisa vhidhiyo yedu kwatinokuratidza nhanho nhanho, asi chinhu chekutanga chauchazoda ibhatiri. CR2032 kuti iwe unogona kutenga zviri nyore paAmazon kana yako yakajairika nzvimbo yekutengesa. Aya mabhatiri (kana maseru) anodhura inopfuura euro imwe payuniti, kunyangwe achiwanzouya mumapasuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomeKit » Maitiro ekutarisa bhatiri reAirTag yako
Iyo Apple Watch yaigona kuona kutadza kwemoyo neEKG iri nyore